မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လွှတ်တော်နာယက သတိပေး | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| September 18, 2012 | Hits:4,428
4 | | ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရအရ အားလုံးပါဝင် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြည်သူ့ကိုယ်စား တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဏ္ဍိုင်အသီးသီးက ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပွင့်လင့်မြင်သာမှုမရှိပါက မှန်ကန်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးပျက်တတ်ကြောင်း ယနေ့ ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အပေါ် ပြည်သူနှင့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များက သိရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်ပြီး ဘောင်ခတ် ကန့်သတ် တတ်ကြပါတယ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်းသည်၊ အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သဘောလက္ခဏာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်တည်ဆောက်မှုကို တုံ့နှေးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထိုအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်လွှတ်တော်တွင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် NGO အဖွဲ့များ တက်ရောက်ကြသည်။
စနစ်ဟောင်းတစ်ခုမှ စနစ်သစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင် စနစ်ကို နားမလည်ခြင်း၊ နားလည်သော်လည်း မသိစိတ်က လက်မခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိနိုင်အောင်လည်း ဖြစ်တတ်ကြောင်း ဦးခင်အောင်မြင့်က ထည့်သွင်းပြောဆို သွားသည်။
“အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးလျက် ဒီမိုကရေစီ ဗဟိုချက်ဆိုတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့၏ ဆောင်ပုဒ်အရ နိုင်ငံသား အားလုံးက ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ကိုယ်စား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူအသီးသီးက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသော တိုင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရန်လိုအပ်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်လက်ခံ ကျင့်သုံးသည့် လူ့ဘောင်ဘဝရှိရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ပညာပေးလုပ် ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းသည့် အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်းအရုံးများကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
ထို့အတူ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် လှုပ်ရှားရန် အားယူနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ရေးသား ဖြန့်ဝေခွင့်များကိုလည်း တောင်းဆိုနေလျက်ရှိကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသည်။
“သတင်းကဏ္ဍကနေ တော်ဖြောင့်မှန်ကန်စွာ ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ပြည်သူကို ဒီမိုကရေစီ ပညာပေးဖို့လည်း လိုအပ်လျက် ရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ပြည်တောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄ အရ ဒီမိုကရေစီရဲ့ စရိုက် လက္ခဏာကို ဖော်ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးခင်အောင်မြင့် က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီ မျိုးဆက်သစ်ထွန်းကားရေး အတွက်လည်း အဆင့်ဆင့်သော ပညာသင်ကြားရေး ကဏ္ဍတွင် အခြေခံ ဒီမိုကရေစီ ဘာသာရပ်မှ ခေတ်မီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်ထိ ပြဌာန်သင်ကြားရေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ကြီးမှူး၍ နေပြည်တော် လွှတ်တော်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်က စတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတ စာကြောင့် မီဒီယာများကို ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော် ပိတ်ပင်
ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြမှုသတင်း အစိုးရ မီဒီယာများ ဘက်လိုက်ဖော်ပြမှု ဝေဖန်ခံရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ဘုရင် September 19, 2012 - 10:05 am	သက်တမ်းနုနယ်သေးသောလွှတ်တော်သုံးရပ်စည်းစည်းလုံးလုံးရှိစေချင်ပါတယ်။
Reply	swe htwe September 20, 2012 - 12:26 am	He says the right thing. Let’s praise and support him.